Iv Infusion သတ်မှတ်မည်
အရွယ်အစား ၄ ခုရရှိနိုင်သည်။ 1 ML, 4ML, 0.5ML, 1ML,3ML
၆။ အပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှထိတွေ့ခြင်းမရှိပါ။ လူနာမှတိုက်ရိုက်စည်သို့ရောက်သည်။
7. မြုံ: EO ဓာတ်ငွေ့, အဆိပ်မဟုတ်သောနှင့် Non- pyrogenic
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များအားလုံးသည် WHO ၏လမ်းညွှန်ချက်များမှတစ်ကြိမ်ထက်မကသောဆေးထိုးအပ်များသို့ပြောင်းလဲသွားပါကသန်းပေါင်းများစွာသောလူများကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာထိုးဆေးမှတဆင့်ကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့်၎င်းသည်မတော်တဆအပ်ထိုးတံချောင်းဒဏ်ရာများ၊ ဆေးထိုးအပ်သုံးပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးချခြင်းနှင့်မလုံခြုံသောချွန်ထက်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤနွေ ဦး ရာသီတွင်တင်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြွတ်နှင့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောအပ်၊ ဆေးထိုးပြီးသည်နှင့်ဆေးထိုးအပ်သည်နွေ ဦး စွာတင်သောစည်ထဲသို့အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် မတော်တဆရှောင်ကြဉ်ပါ အပ်စိုက်ကုထုံးအန္တရာယ်များနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုမှု
Feeding Tube Bags အသွင်အပြင် - စွမ်းရည် - ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၂၀၀ မီလီမီတာအမျိုးအစား - ရေစုပ်စက် ...
Shuangmei မီးယပ်အထူးကုကိရိယာများအားသာချက် - ၁။ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအမြင့်ဆုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှု ....
Parameter: 1. Latex အခမဲ့ 2. တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်း 3. Tube ...
Iv Set အသွင်အပြင် - ၁။ စွမ်းရည် ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀ မီလီမီတာ ၂။ PETG ဗူးရား၊ ABS ...
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဆေးထိုးအင်္ဂါရပ်များ: ၁။ ၀.၅ အရွယ်အစားရှိနိုင်သည်။
မြုံကလေးဆီးစုဆောင်းခြင်းအင်္ဂါရပ်: 1. ပစ္စည်း: PVC, အဆိပ်မဟုတ် 2. 10. ထုပ်ပိုး: XNUMXpcs / အိတ် ...
မလိုအပ်သော ၀ တ်မှုန်ခံအင်္ဂါရပ်များ - ၁။ စွမ်းရည် - 1cc, 50cc, 60cc, 100cc, 150cc, ...
Feature: ၁။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် PP: Syinge စည်၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရည်အိတ်များအိတ်အသွင်အပြင်: ၁။ ပစ္စည်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် ...
အသွင်အပြင်: 1. 10 Sets ထုပ်ပိုး။ 2. မြုံနှင့်စေး - အခမဲ့။ ၃ ....
Feature: ၁။ ချိတ်တွဲချိတ်ဆွဲ။ အိပ်ယာခင်းညှပ် ၂ ....
တစ်ခါသုံးဆီးသွားရေသန့်အိတ်အသွင်အပြင်။ ၁။ ဆေးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း။
1. ပစ္စည်း - PVC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဆိပ်မဟုတ်ပါ။ ၂။ Valve type: Pull-push ...
အသွင်အပြင်: 1.2လီတာစွမ်းရည် 2. အောက်ခြေထွက်ပေါက်မရှိလျှင်, 90cm ...
အသွင်အပြင် - ၁ ။ ၂။ ထိပ်ဆုံးမှ
ဖော်ပြချက် ၁။ စွမ်းရည် - 1ML, 350ML, 500ML, 600ML, 750ML 900. Anti-reflux ...
အင်္ဂါရပ်: 1. ပစ္စည်း: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် PVC ပစ္စည်း။ 2. အရောင်: အဖြူ + ခရမ်းရောင် ...
အသွင်အပြင် - ၁။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် PVC ပစ္စည်း။ 1. 2, 1000 ml ...
Parameter: ၁။ လီတာပမာဏသည်အိတ်ငယ်ကိုမကြာခဏပြောင်းလဲနိုင်စေသည်။
Shuangmei Medical Supplies Co. , Ltd သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုအတွက်လူသိများသောတစ်ခါသုံးဆေးပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
NO.88, Gexi လမ်း၊ Dongcheng မြို့၊ Linhai, Zhejiang, China
မူပိုင်ခွင့် 2021 |Shuangmei ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။